မိုင်းတုံမြို့နယ်တွင် ဇနီးဖြစ်သူမှ ခင်ပွန်းကိုခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ပြီး ထွက်ပြေးရန်ကြိုးပမ်း
July 14, 2019 Cele Love 0
မိုင်းတုံမြို့နယ်တွင် ဇနီးဖြစ်သူမှ ခင်ပွန်းကိုခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ပြီး ထွက်ပြေးရန်ကြိုးပမ်း ခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ပြီးထွက်ပြေးရန်လုပ်ဆောင်နေသည့်ဇနီးအချိန်မှီဖမ်းဆီးရမိခင်ပွန်းဖြစ်သူကိုခေါင်းဖြတ်သတ်ဖြတ်ပြီးထွက်ပြေးရန်လုပ်ဆောင်နေသည့်ဇနီးဖြစ်သူကိုရဲတပ်ဖွဲ့အချိန်မှီဖမ်းဆီးရမိ ခဲ့ ပါတယ် …။ ရှမ်း(အရှေ့) ၊ဇူလိုင် ၁၄ မိုင်းတုံမြို့တွင် တောင်ယာစိုက်ခင်းတစ်ခုအတွင်း အမျိုးသားတစ်ဦး ခေါင်းဖြတ်အသတ်ခံရမှုနှင့်ပတ်သက် ဇနီးဖြစ်သူကို ရဲတပ်ဖွဲ့ကစစ်ဆေးမေးမြန်းရန်နေအိမ်သို့လာရောက်စဉ် ဇနီးဖြစ်သူမှာ ရွှေရတနာပစ္စည်းများ နှင့်အတူ ထွက်ပြေးရန်ကြိုးစားနေသည်ကို ရဲတပ်ဖွဲ့တွေ့ရှိ သဖြင့် အချိန်မှီဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြောင်းသိ ရှိရ […]
” လူနာကြည့် မလာပါနဲ့ မြန်မာလူမျိုးများ ” …ဆေးရုံမှာ လူနာကြည့်သွားတဲ့အခါ သိထားစရာအချက်များ
” လူနာကြည့် မလာပါနဲ့ မြန်မာလူမျိုးများ ” …ဆေးရုံမှာ လူနာကြည့်သွားတဲ့အခါ သိထားစရာအချက်များ နောက်ဆုံးထွက်သက်ကို ပင်ပမ်းကြီးစွာ ဖြတ်ကျော်ရမယ့်နေရက်တွေ၊အချိန်တွေ ရောက်လာတဲ့အခါ ကျေးဇူးပြုပြီး လူနာကြည့်၊လူနာအားပေး မလာပါနဲ့တော့ …… (၁) စကားပြောဖို့ကိုပင် မနည်းအားယူနေရမယ့်အချိန်မှာ နေကောင်းလား၊သက်သာလားဆိုတဲ့ သင့်မေးခွန်းတွေ မဖြေချင်တော့ပါ …။ (၂) ရေမွှေးဆွတ်ပြီး […]
အသက်ကြီးမှ အဖွားရယ် ….
အသက်ကြီးမှ အဖွားရယ် …. ရန် ကုန် မှာနေ ပုသိမ်မြို့နှင့်အခြားမြို့တို့အား ရွှေဆွဲကြိုး အစစ်ပြ အတုလိမ်ရောင်းတဲ့ သက်ကြားရွယ်အို အမျိုးသ္မီး အရေးယူလိုက်တဲ့ သတင်း။ ဧ ရာ ဝ တီတိုင်းဒေသကြီး ပုသိမ်မြို့ ရွှေပြည်သာဈေး ရွှေဆိုင်းတန်းရှိ ရွှေဆိုင်တဆိုင်မှာ သက်ကြားရွယ်အို အဖွားအိုတစ်ယောက်က သိန်း(၂၀)ကျော်တန် […]
Breaking News ဧရာဝတီမြစ်ရေတက်မှု ည ၈ နာရီတွင် စိုးရိမ်ရေအမှတ် ကျော်လွန်သွား …
Breaking News ဧရာဝတီမြစ်ရေတက်မှု ည ၈ နာရီတွင် စိုးရိမ်ရေအမှတ် ကျော်လွန်သွား … ညနေ ၅ နာရီ အချိန်က ၁၁၈၀ စင်တီမီတာ၊ ညနေ ၆ နာရီတွင် ၁၁၈၈ စင်တီမီတာ၊ ည ၇ နာရီတွင် ၁၁၉၇ စင်တီမီတာ၊ […]
ရေနွေးထဲ ဂျင်းထည့်ပြီး အိပ်ခါနီးတိုင်းသောက်ပေးရင် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူးများ ဂျင်းမှာ သတ္တုဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပါတယ်။ ပိုတက်ဆီမယ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်၊ ကော့ပါးသတ္တုတွေပါဝင်တာကြောင့် နေ့စဉ်မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ဓာတ်စာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ညအိပ်ရာဝင်ခါနီးတိုင်း ရေနွေးထဲ ဂျင်းထည့်ပြီးသောက်ပေးလိုက်ရင် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်း အကျိုးကျေးဇူးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော် … (၁) မူးမော်ခြင်းကင်းဝေးစေမယ် သတ္တုဓာတ်နဲ့ဗီတာမင်တွေကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် မူးမော်ခြင်းတွေ၊ ခေါင်းနောက်တာတွေကို […]
အလုပ်ပြုတ်တာကို မပြောရက်ခဲ့တဲ့ ယောက်ကျားဖြစ်သူကို အံ့သြစေခဲ့တဲ့ ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ စိတ်ထား …
အလုပ်ပြုတ်တာကို မပြောရက်ခဲ့တဲ့ ယောက်ကျားဖြစ်သူကို အံ့သြစေခဲ့တဲ့ ဇနီးဖြစ်သူရဲ့ စိတ်ထား … သူအလုပ်ပြုတ်နေကြောင်းသူ့ ဇနီးကို မပြောပြရက် ခဲ့ပါဘူး …။ မနက်ခင်းတိုင်းမှာ ပုံမှန်လိုပဲ မနက်စာစားပြင်ဆင်ပြီး သူ့ဇနီးလေးရဲ့ ပါးကိုနမ်းပြီး “ချစ်လေး ရေ အလုပ်သွားပြီ နော် ညနေမှပြန်တွေ့ ကြမယ် ကွယ် ”လို့ […]
ဒီနေရာ (၈)ခု မှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံနဲ့နော် …
ဒီနေရာ (၈)ခု မှာ တစ်နေရာလောက် မှဲ့ပါတဲ့သူဆို လုံးဝ လက်လွှတ်မခံနဲ့နော် … မှဲ့ နဲ့ပတ်သက်ပြီး အယူအဆ အမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်။ မှဲ့တစ်ခုစီတိုင်းမှာ ဘဝနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ မက်ဆေ့ခ်ျ တစ်ခုစီရှိပါတယ်လို့ မှဲ့ပညာရှင်တွေက ဆိုစမှတ်ပြု ထားကြပါတယ် …။ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ နေရာအမျိုးမျိုးမှာ မှဲ့တွေရှိနိုင်ပြီး အခုဖော်ပြမယ့် […]
“သံမန်တလင်းပေါ် ကလေးကိုဆံပင်စောင့်ဆွဲပြီး တရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်ခဲ့တဲ့ မူလတန်းဆရာမ(ရုပ်/သံ)”
“သံမန်တလင်းပေါ် ကလေးကိုဆံပင်စောင့်ဆွဲပြီး တရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်ခဲ့တဲ့ မူလတန်းဆရာမ(ရုပ်/သံ)” တရုပ်နိုင်ငံ ဒေါင်ဂွမ်းပြည်နယ်ရှိ စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်းတွင် မူလတန်းပြဆရာမတစ်ဦးက ကျောင်းဝန်းအတွင် ငိုယိုပြီး သံမန်တလင်းပေါ် လဲကျနေသည့် ကလေးကို ဆံပင်မှစောင့်ဆွဲကာ ပြန်ထရန် အတင်းကြိုးစားနေရာ ကလေးငယ်မှ ပြန်မထနိုင်သဖြင့် ဆံပင်မှဆွဲကာ သံမန်တလင်းပေါ် တရွတ်တိုက်ဆွဲခေါ်ခဲ့တာ ပဲ ဖြစ်ပါတယ် …။ ကလေးငယ်မှာ […]
မျှော်လင့်ရင်ခုန်စွာ ကုန်းတစ်တန် လှေတစ်တန် ခရီးနှင်ခဲ့ပြီး…..အွန်လိုင်းချစ်သူနဲ့ အတွေ့ ငုတ်တုတ်မေ့ တုန်လှုပ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်
မျှော်လင့်ရင်ခုန်စွာ ကုန်းတစ်တန် လှေတစ်တန် ခရီးနှင်ခဲ့ပြီး…..အွန်လိုင်းချစ်သူနဲ့ အတွေ့ ငုတ်တုတ်မေ့ တုန်လှုပ်ခဲ့ရတဲ့အဖြစ် ယနေ့ခေတ်ကာလမှာ လူမှုကွန်ယက် အွန်လိုင်းသုံးစွဲမှုဟာ ကမ္ဘာတလွှားက လူတိုင်းအတွက် အရေးကြီးဆုံး အခန်းကဏ္ဍမှာ ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်း သုံးစွဲကြပြီး မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း တိုးကာ ဘဝအတွက် အထောက်အကူတွေရပြီး အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေချောမွေ့သူတွေ ရှိလာကြသလို. […]
ပိုက်ဆံချေးထားသူဆီကနေ အမြန်ဆုံးပိုက်ဆံပြန်ရစေမယ့် နည်းလမ်း(၅)မျိုး
ပိုက်ဆံချေးထားသူဆီကနေ အမြန်ဆုံးပိုက်ဆံပြန်ရစေမယ့် နည်းလမ်း(၅)မျိုး ဒီလိုအချိန်ဆို လက်ထဲမှာ ပိုက်ဆံလည်း သိပ်မရှိတော့ဘူး ။ ဒီတော့ ကိုယ့်ဆီမှာ ပိုက်ဆံချေးထားတဲ့သူတွေဘာတွေ လိုက်ရှာပြီး အကြွေးတောင်းဖို့ ပြင်ဆင်နေရပြီ။ အကြွေးတောင်းတယ်ဆိုတာကလည်း မလွယ်ဘူးနော်။ ကိုယ်က နည်းစနစ်ကျကျ တောင်းတတ်မှ။ မဟုတ်ရင် ပြန်ရဖို့က လွယ်တာမဟုတ်ဘူး။ ကဲ…ဒီတော့ နည်းစနစ်ကျကျ ဘယ်လိုအကွက်တွေသုံးကြမလဲ။ […]